Sida looga codsado lacag celin App Store si toos ah iPhone | Wararka IPhone
Cristina Torres sawir-haye | | Dukaanka App
Haddii aad tahay isticmaale yaa jecel inay tijaabiyaan barnaamijyadooda ama aad u dalbadaan Sida loo soo dejiyo oo dhan si ay kuu qanciso, waxay u badan tahay inaad u baahan tahay inaad ku soo celiso App Store. Haddii tani ay tahay kiiskaaga, ama aad rabto in lagaa hortago haddii ay kugu dhacdo mustaqbalka dhow, maanta waxaan kuu sharraxeynaa sida habka codsashada lacag celinta loogu fulinayo App Store laftiisa si toos ah iPhone-ka. Ma rabtaa inaad ogaato sida loo sameeyo?
Dhab ahaan, talaabooyinka la raaco si loo codsado a App Store si toos ah uga soo celi iPhone Runtii way fududahay oo markaad ku fuliso qorshaha aan hoos ku soo bandhigno, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato sida loo sameeyo haddiiba ay kugu dhacdo adiga. Waxa ugu fiican ma noqon doono, iyo in dhammaan barnaamijyada aad iibsato ay runtii u qalmaan, laakiin mararka qaarkood, rajooyinkeennu aad ayey u sarreeyaan waxayna ka sarreeyaan awoodda kuwa wax dhisaya iyo fikradaha wanaagsan ee ay ka tageen isticmaaleyaasha kale xaalado badan.
Sida loo codsado lacag celin ka timaadda iPhone-ka
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad gasho goobta Ka warbixi dhibaato kana yimid Apple.
Markaad gudaha gasho, waa inaad raadisaa arjiga aad jeceshahay inaad kusoo laabato liiska ka muuqda shaashadda.
Markaad raadiso, waxaad arki doontaa dhinaca bidix uun inuu jiro badhan tilmaamaya Warbixin. Waa inaad riixdo si aad u sii wado oo aad u bilowdo codsiga soo celinta.
Hadda waxaad u baahan doontaa inaad ka doorato menu-ka hoos-u-dhaca ah waa maxay dhibaatada kugu kallifaysa inaad u dirto warbixinta Apple oo aad ku sharaxdo sanduuqa hoose.
Hadda waxaad heli doontaa ogeysiis ah in adeegga Apple uu kula soo xiriiri doono 48 saac ee soo socda.
Guud ahaan sidan, iyo haddii ay jiraan sababo si sax ah loogu sharraxay soo celinta, waxay badiyaa galaan soo celinta iyada oo aan wax dhibaato ah ku qabin koontadaada.
Miyaad hore isku dayday lacag celin uga samee barnaamijyada App Store sidan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Dukaanka App » Sida looga codsado lacag celin App Store si toos ah iPhone
Intee in le'eg ayay ku soo celinayaan lacag celinta maxaa yeelay waxay horey u ahayd 7 maalmood
Waxaan codsanayaa lacag celin ay ka qaateen kaarkayga ogolaansho la'aan, waa 3, mid kamid ah 17 pesos, midna 179 iyo mid kale 599, hadii aysan ii soo celin ama cadeyn, bangigeygu wuxuu usii gudbi doonaa dalabka u dhigma. shirkaddaada.
Jawaab Norma amador Zumaya
Thanks to qoraalkan waxaan awooday inaan codsado soo noqoshada.
Waxaan rajeynayaa in Apple ay u hogaansan tahay soo celinta
Waxaan codsanayaa in la ii soo celiyo lacagtayda, maadaama ay kaarkayga ku dallaceen kharashka APP-ka oo aanan rakibin. Ma haysto wado aan ku codsado lacag celinteyda khadka tooska ah tan iyo markii ay ii sheegto inaysan sabab u ahayn sidaas. Bogga sharraxaaddu saaxiibtinimo ma leh gabi ahaanba, waxaan jeclaan lahaa inaan i siiyo goob ka mid ah Apple-ka oo aan ka geli karo cabashadeyda ku saabsan lacag aan ku rakibay. Lacagta ayaa horay loogu soo qaatay kaarka deynta. (Abriil 3, 2020) Waxaan rajeynayaa in qof ila soo xiriiri doono si aan xal ugu helo biilkan aan habbooneyn.
Jawaab Gisella Patricia de la Peña Rabineau
Hagaag, waxaan waydiistay lacag celin waxaana iimaylku yimid isagoo leh diiwaan galinta waa la badalay laakiin aniga ayaa ah
Markay arkeen bayaankeyga oo ay aniga lacag iiga qaadayaan, si kastaba ha noqotee, waan hubiyey diiwaangelinta umana muuqato mid firfircoon, maxaan sameeyaa
Ku jawaab Marysol Ramírez
Pangu wuxuu soo saaray noocii ugu horreeyay ee JAILBREAK u ah Mac
Tweaks la jaan qaada macruufka 9